रौतहटको रिजल्ट कहिले? को छ... :: सुजिता कार्की :: Setopati
रौतहटको रिजल्ट कहिले? को छ अगाडि?
रौतहटको १८ स्थानीय तह मध्ये १५ स्थानीय तहमा अहिले मत गणना जारी छ।
गरुडा नगरपालिकामा विवाद भएपछि गणना रोकिएको छ। त्यहाँ सर्वदलीय बैठक बसेर विवाद सुल्झाउने प्रयास भैरहेको छ। ईशनाथ नगरपालिकामा भने फोरम लोकतान्त्रिकका उम्मेदवार विजयी भएका छन्।
फोरम लोकतान्त्रिकका सन्तोषकुमार मेहता मेयरमा र उपमेयमार हुसेन आरा निर्वाचित भएका हुन्। अर्को परोहा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका शेख वकिल विजयी भएका छन्।
अन्य स्थानहरूमा भने मतगणना जारी छ। रौतहटका दुई गाउँपालिकाको मतगणना भैरहेको छ। दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा शुक्रबार बिहानसम्ममा सबै परिणाम आउने सम्भावना छ।
अहिले त्यहाँ तीन स्थानमा मत गन्ने तयारी भैरहेको निर्वाचन अधिकृत प्रल्हाद वर्णवालले जानकरी दिए। त्यहाँ एकमात्र वडाको गणना सकिएको छ। जसमा कांग्रेसले जितेको छ। गाउँपालिकाको अध्यक्षमा भने माओवादी केन्द्र अगाडि छ।
यमुनामाई नगरपालिकामा पनि मतगणना चलिरहेको छ। यमुनामाईमा पनि शुक्रबार बिहानसम्म मतपरिणाम आउने अवस्था छ। त्यहाँ पनि माओवादी केन्द्र अगाडि छ। दुवै गाउँपालिकामा ५/५ वडा भएपनि जनसंख्या ठूलो छ। रौतहटको सदरमुकाम समेत रहेको गौरमा धेरैको चासो छ। त्यहाँ गणना चलिरहेको छ। एमालेका शम्भु शाह र राजपाका अजय गुप्ताबीच गौरमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ।
दुई स्थानमा गणना भैरहेको गौरमा क्रस भोट धेरै भएकाले गणनामा ढिलाई भैरहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत लेखनाथ ढकालले बताए। त्यहाँ राजपा अगाडि लागेको छ भने एमाले पछाडि परेको छ। राजपाका अजयगुप्ताले २५५२ मत प्राप्त गरेका छन् भने एमालेका शम्भु शाहले २०२५ मत प्राप्त गरेका छन्।
गजुरा नगरपालिकामा आजै रातीसम्म मतपरिणाम आउन सम्भावना छ। त्यहाँ गणना छिटो भैरहेको छ। त्यहाँ राजपा अगाडि छ। उसलाई माओवादी केन्द्रले पछ्याइरहेको छ। चन्द्रपुरमा भने गणना जारी छ। त्यहाँ मतपरिणाम शनिबारसम्म आउनसक्ने निर्वाचन अधिकृत कमलराज भण्डारीले बताए।
देवाही गोनाडी नगरपालिकामा आजै मतपरिणाम आउन सक्ने अवस्था रहेको निर्वाचन अधिकृत दशरथ पंगेनीले बताए। त्यहाँ संघीय फोरमका उम्मेदवार अगाडि छन्। उनलाई एमाले उम्मेलवारले पछ्याइरहेका छन्। फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा कुनै विवाद नभए आजै रातीसम्ममा मतपरिणाम आउने अवस्था छ। त्यहाँ कांग्रेस उम्मेदवार अगाडि छन्। जसको प्रतिस्पर्धा माओवादी उम्मेदवारसँग भैरहेको छ।
बौधीमाई नगरपालिकामा पनि राती अबेरसम्ममा मतपरिणाम आउने अवस्था रहेको निर्वाचन अधिकृत बद्रीप्रसाद नेपालले बताए। बौधीमाईमा फोरम र माओवादीकेन्द्रबीच प्रतिस्पर्धा छ। संघीय फोरम अगाडि छ।
त्यस्तै मौलापुर, राजदेवी र राजपुरमा पनि गणना अगाडि बढिरहेको छ। मौलापुरमा माओवादी र राजदेवीमा कांग्रेस अगाडि छ। राजपुरमा पनि माओवादी अगाडि छ। वृद्धाबन नगरपालिकामा पनि माओवादी अघिअघि र संघीय फोरम पछिपछि छ। माधव नारायणमा त्यसको उल्टो संघीय फोरम अघिअघि र राजपा पछि पछि छ। दुवै स्थानमा भोलीमात्र मतपरिणाम सार्वजनिक हुनसक्ने अवस्था रहेको निर्वाचन अधिकृतहरूले बताएका छन्।
रौतहटकै गढीमाईमा राजपा अगाडि छ। त्यहाँ शुक्रबार बिहानसम्मा मतपरिणाम आउन सक्ने निर्वाचन अधिकृत देवेन्द्रराज आचार्यले बताए। राजपा र नेपाली कांग्रेसबीच प्रतिस्पर्धा छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धवबहादुर थापाले कटहरियामा मतगणना जारी रहेको उल्लेख गरे।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असोज ५, २०७४, ११:११:०२